Fidiran’ny mpianatra: hitombo isa ny sekoly hisy « parascolaire » | NewsMada
Fidiran’ny mpianatra: hitombo isa ny sekoly hisy « parascolaire »
Andro vitsy sisa isaina, hamonjy sekoly amin’izay ny mpianatra. Anisan’ny fiovana hita amin’ity taom-pianarana ity, raha ny fanadihadiana natao, ny fitomboana isa eo amin’ireo sekoly hampiditra ny « parascolaire » ao aminy. Ny an’ny sekoly sasany eto an-dRenivohitra aza, tena taranja hahazoana naoty mihitsy izy ireny fa tsy mijanona ho fanitaran-tsaina ho an’ny mpianatra fotsiny.
Somary mirona kokoa amin’ny zavakanto sy kolontsaina malagasy ny « parasco » any anivon’ny sekoly, manomboka izao, raha ny vokatry ny fanadihadiana natao hatrany. Anisan’izany ny fampianarana zavamaneno toy ny valiha, ny fampianarana mamolaka ny tanimanga ho tonga taozavatra mampiavaka ny Malagasy, ny fanaovana sary hosodoko, sns. Na mbola tsy maro loatra aza, anisan’ny hampiditra ireo taranja mivoy ny zaakanto sy ny kolontsaina malagasy ireo ihany koa ny sekoly sasantsasany mampiasa ny fiteny vahiny.
Ny sekoly miankina sy tantanan’ny misiona kosa no ahitana ny « parasco » maro indrindra. Raha ny fanazavan’ireo mpitantana azy ireny, « mila mahafantatra ny fototra maha izy azy ny mpianatra. Misy talenta miafina ihany koa any amin’izy ireo ka mila fohazina. Manana saina maranitra sy afa-mandinika lalina ireo miaina miaraka amin’ny zavakanto… Noho izany, tena ilaina ny « parascolaire » ».
… Mba hahatafita ny fampianarana anefa, ilaina ny fananana mpampianatra havanana amin’ilay taranja ampianarina amin’ny « parascolaire » sady mahay mampita fahalalana ho an’ny mpianatra. Mety mbola ho vitsy anefa ny mahafehy azy roa ireo miaraka, noho izany, ilaina hatrany ny manome fiofanana ireo hampianatra « parascolaire ».